Noocyada Shaarbaha - Dharka Ragga ee Qaabka leh | Ragga Stylish
Shaarubaha had iyo jeer waa la xirxiran jiray jiilal iyo Waxaa loo tixgeliyey inay yihiin astaan ​​uurjiifnimo. Dadka kale ee awoodda leh waxay ku kordhiyeen maamulkooda taariikhda oo dhan. Dhallinyaradu sidoo kale waxay ku sharaddeeyaan moodada noocan ah, iyagoo koraya shaarib qaro weyn iyo wax ka caqli badan kuwa qaabeeya iyo dhumucdooda.
Haddii aad jeceshahay fikradda ah inaad shaarib sii kordhiso, malaha ma garanaysid sababta loo doorto, maxaa yeelay waxaa jira qaabab badan oo shaarib ah. Waa inaad isku daydaa dooro mid ku dhalaalaya jimicsiga jirka ee wajigaagaIn kastoo laga yaabo inaad si dabiici ah u kori doonto shaarubahaaga.
1 Qaababka shaarubaha
1.1 Shaarib Curly
1.2 Shaarubaha kabo
1.3 Qalin ama sanjabiil yari
1.4 Shaarubaha Chevron
1.5 Shaarubaha Walrus
1.6 Iyada oo leh qaab haram ah
2 Shaarubaha caanka ah ee dejiya isbeddellada
Maskaxda ku hay in haddii aad doorato shaarib Waa inay ku socotaa hadba qaabkaaga iyo shakhsiyaddaada. Haddii aad doorato cabir iyo dhumuc, waa inaad xisaabta ku darsataa in timahaaga timaha ay leeyihiin xoog iyo faro ku filan oo ay ku buuxiyaan natiijada aad rabto inaad hesho.
Qaabkan waxaa loogu talagalay ragga geesinimada leh, oo jecel inay siiyaan muuqaal gaar ah iyadoo aan loo eegin in indhaha oo dhami ay tilmaamayaan shaarubaha. Iyagu waa kuwo casri ah oo iswaafajinaya, oo ku habboon wejiyada dhaadheer oo abuuraya muuqaal hagaagsan taas Waxay u taagan tahay haysashada qalooca talooyinka.
Shaarubaha Imperial waa mid ka mid ah, halkee timuhu way adag yihiin oo dhammaadkooduna way isku laaban yihiin ama isku laaban yihiin, qaar baa dhabannada gaadha. Shaarubaha Ingiriiska, oo sidoo kale loo yaqaan 'handlebar', waa mid kale oo ka mid ah shaarubaha curlka ah ee ka soo laalaada geesaha bushimaha. Way ka qurux badan tahay kana siman tahay tii hore.
Shaaribadan weyn ee sidoo kale loo yaqaan 'Horseshoe' waxay leedahay qaab aad u gaar ah. Naqshadeedu waa U-foorari Waana hubaal inay ku xasuusineyso muuqaalkiisa ragga 70-meeyadii, oo ay ku jiraan kuwa wada mootooyinka iyo ragga adag. Si loo siiyo qaabkeeda, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo xiriir ka dhexeeya garka iyo shaarubaha oo la jaro illaa ay ka samaysato fardo fardo ah. Waxay ku habboon tahay wejiyada laba jibbaaran iyo leydi.
Qalin ama sanjabiil yari
Shaaribkani waa mid yar, iftiin leh oo aad loo cusbooneysiiyey, maaddaama ay lagama maarmaan tahay in la muujiyo wax badan si loo dhammeeyo bixinta qaabka xariiq wanaagsan oo tilmaamaysa dibnaha sare. Shaaribkan sidoo kale loo yaqaan 'lampshade' wuxuu ku habboon yahay wejiyada wareega ama oval, laakiin guud ahaan dhammaan noocyada wejiyada.
Qaabkiisu waa Talyaani waana midda ugu badan ee rag badani adeegsadaan, munaasabado badan oo gadh yar u oggolaanaya. Waxyaabaha ay ka kooban tahay timaheedu waa xoog badan yihiin, cufan yihiin oo ballaadhan yihiin, daboolaya bushimaha kore oo dhan ilaa sanka. Cidhibtooda dhammaadku waa hagaagsan yihiin, oo dib loo cusboonaysiiyay, oo waxay ku dhaadhacayaan geeska bushimaha. Waxay ku habboon yihiin wejiga oval iyo dhererka.
Kan hore waa shaarubaha Walrus kan kalena shaarbaha Chevron
Shaaribkani sidoo kale wuxuu calaamadeeyay moodada oo waxaa lagu gartaa muuqaalkeeda oo ah qaab "walrus" ah. Waxay gabi ahaanba daboolaysaa bushimaha kore ilaa sanka, waa mid aad u buuxa oo ku soo degaya labada dhinac ee afka iyo gadhka. Waxaa lagugula talinayaa wajiyada wareega ama oval.
Iyada oo leh qaab haram ah
Shaarib kale oo cidhiidhi ah oo xoogaa dufan ah oo la jarjarey si loo siiyo qaabkaas saddex-geesoodka ah. Qaabkiisu waa casri iyo gurid, siinta dhalinyaradaas oo aan si dhab ah u taaban. Brad Pitt waa mid ka mid ah isbeddelada caanka ah ee caanka ah, wuxuu umuuqdaa mid xarrago leh oo caqli badan sababo la xiriira midabkiisa timo cad.
Shaarubaha caanka ah ee dejiya isbeddellada
Shaarubaha Fu Manchu isagu waa mid qaas ah oo wuxuu siiyay sumcadiisa astaamaha sida dabeecad khayaali ah. Qaabkeedu waa sida shaarbaha 'fardaha', in kasta oo uu ka fiican yahay. Maaha in lagu sharraxo labada dhinac ee afka, laakiin waa in loo oggolaadaa inay hoos uga soo degto sintimitirro badan oo dhammaystiran oo dhammaystiran.
Shaarib kale oo caan ah waa waxa loogu yeero 'Cadayga ', burushka ama Chaplin. Qaabkeedu waa cidhiidhi, gaaban yahay oo cufan yahay, markaa waa in loo daayaa dad aad u fara badan ka dibna dhinacyada laga soo gaabiyo. Waxay ku xusuusin doontaa jilaaga Chaplin ama hoggaamiyaha Jarmalka Adolf Hitler.
Shaarib Dalí Waa ikhtiraaca caanka Salvador Dalí, sidaa darteed asal ah, kacaan ah oo u shaqeeyay sidii hal abuureheeda. Qaabkeeda waxaa lagu gartaa inuu yahay shaarib ganaax leh talooyinka kor, shaki la'aan waxay astaan ​​u tahay shakhsiyad badan.
Cantinflas Wuxuu sidoo kale qaab ku dhigay shaaribkiisa gaarka ah. Maaha shaaribada caadiga ah ee qaabeynta korka bushimaha, laakiin gebi ahaanba waa la xiiray oo isagoo ka tagaya qaar ka mid ah dhamaadka geesaha bushimaha.
Yaanan ilaawin in si kor loogu qaado tayada shaaribku u leeyahay daryeel taxane ah. Waa inaad haysataa mishiin wanaagsan oo wax lagu qoro si loo jaro qaybaha gaarka ah iyo qaabka. Hadana haddii aad jeceshahay inaad xirato shaarib tilmaamo wareegsan ama dhammaadyo qaabeysan leh, waxaa jira hagaajiyeyaal khaas ah oo suuqa jooga si loo siiyo hagaajintaas. Si aad u daryeesho una ilaaliso, waxaad isticmaali kartaa isla badeecooyinka gadhka. Tani waxaad ka akhrisan kartaa mid ka mid ah qoraalkeena ku saabsan 'talooyinka ugu fiican ee lagu xanaaneeyo gadhka'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Qaababka shaarubaha